Nnwom 77 NA-TWI - Amane mu awerɛkyekyere - Misu dennen - Bible Gateway
Nnwom 76Nnwom 78
Nnwom 77 Nkwa Asem (NA-TWI)
77 Misu dennen mefrɛ Onyankopɔn; misu dennen na otie me. 2 Ɔhaw mu, mebɔ Awurade mpae; anadwo mu nyinaa, mema me nsa so bɔ mpae nanso me werɛ nkyekye. 3 Sɛ midwen Onyankopɔn ho a, migu ahome; sɛ midwen komm a, mabasa mu bu. 4 Ɔma me si pɛ anadwo nyinaa. Nsɛm haw me nti, mintumi nkasa.